Banks entana ny fivarotana sakafo andraikitra, rehefa ampiasaina ho toy ny "sampany". Mpiasan'ny banky ara-barotra angera voatery tsy nandray onitra na ny mety na nitombo nitombo ny vola lany. Ny banky hanamarina ny tenany amin'ny alalan'ny sampana banky dia ho azo antoka kokoa toy izany. Izay ataony dia tsy milaza fa tsy azo antoka ho an'ny olon-drehetra afa-tsy ny tenany ny banky. Tsy misy hafa orinasa dia toy ny fitiavan-tena toy ny banky. Banky biraon'ny lavitra azo antoka kokoa noho ny toeram-pivarotana. Ankoatra izany, banky halatra rafitra misy afa-tsy ampahany kely ny fitambaran'ny ny mofo misy. Ny fanambarana avy amin'ny 2011 dia nampiseho fa ny banky halatra fotsiny ihany no isaina ho dimy isan-jato mahery ny halatra nataony ao amin'ny toeram-pivarotana sy ny banky. Ankehitriny dia manazava ihany koa vola toy ny banky fikirakirana vola azo antoka fa amin'ny fampiharana dia azo atao ny manao fandrobana banky.
Misy tombon-dahiny lehibe ho orinasa hafa ankoatra ny banky nanome ny sata ny banky. Matetika izy ireo, raha azo atao, mihoatra noho cashless cashless banky. Rehefa amin'ny fomba hafa dia dokam-barotra ho an'ny aterineto banky, e -Proof ny famantarana sy ny mandoa faktiora ao amin'ny Internet, ary manana vokany maditra. Ohatra, milaza ny fomba "dia ho mora ny manala ny vola taratasy any amin'ny namany Sary" rehefa izany fa tsy azo ampiharina. Ampiharina ho an'ny hafa eo amin'ny fiainana andavanandro, dia mety ho toa toy izany.
"Eritrereto ny fomba mety dia ho handao ny fiara ao an-trano, ka mandehana miasa fa tsy"
(Tena salama tsara sy miasa ho any fa tena tsy mampahazo aina)
"Tsarovy mba hisorohana ny mahazo aina fanasana vilia rehefa manasa lovia amin'ny tanana"
"Tsy ianao koa tsy ny milina fanasan-damba, ary hosasany amin'ny hazo tsora-kazo tao amin'ny koveta be fandroana"
Dia matetika ny carte de crédit olon-dratsy efa nanekenao ny manao heloka bevava an-tserasera banky. Ohatra iray ny Trojan dia A311 ny fahafatesana koa hoe Haxdoor. Trojans niely amin'ny alalan'ny e-mail. Banky mifandray amin'ny pejy fidirana ny Trojan dia mba Fetsy natao fa tsy misy fahasamihafana mila ho hita hanohitra ny tena. A lehibe lavitra vola azo alaina avy amin'ny tantara ao amin'ny fividianana voafitaka na inona na inona vokatra ao amin'ny Internet. Trojans dia amidy ao amin'ny Internet, ary mety ho vola tsy mifanaraka mba hifanaraka manokana banky. Zavatra lehibe efatra banky no voa mafy.
Select Handelsbanken. Ankivy ATM. Tsy misy dikany ny hiova ho tsy Handelsbanken ho an'ny isam-batan'olona ihany fa koa ho an'ny raharaham-barotra. Ny orinasa efa Swedbank sy Nordea ambany ampy, raha tonga ny taona Handelsbanken ny banky ara-barotra. Ratsy indrindra nahazo etika ampy iray hafa indray mandeha ny tena cashless Danske Bank. Tiako na Danemark sy ny Danes, fa ny banky tokony hanipy indray manerana ny ety, na ny antony tsy hanipy azy eo amin'ny ety. Misy ihany koa ny mihatsaravelatsihy banky.
(Raha niresaka momba Ica toy ny nataon'i indray andro aho dia nahita fa izy ireo nanomboka tamin'ny manokana contactless karatra izay afaka mividy ny tsy vola. Kontantlösheten nandresy ny tany. Mihitsy aho mainka nandrisika ka nanolotra mba hanoratra ilay boky.)
Riksbank lainga ary omeo ny fanaraha-maso
Ny voalohany dia nanana afa Riksbank no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny vola. Tamin'ny taona 80 sy ny taona 90 sy ny fahombiazan'ny nanaraka lahatra (vakio impairments) ankoatra ny zavatra hafa, izay niafara tamin'ny fanakatonana ny biraon'ny Governora. Nisy nandritra ny taona vitsivitsy ny orinasa ho an'ny fiaraha-mientana izay mifantoka amin'ny profitability sy ny vola tahiry. Nantsoina hoe ny vola tany Soeda (PSAB). Ny orinasa nandamoka Lasa ara-bola ary nakatona nidina tamin'ny 2004. Dia tonga ny rafitra deregulated ankehitriny. Ny fanapahan-kevitra momba ity tontolo deregulated manana ny fakany ao amin'ny Mpanatanteraka Board. Ny Riksbank nanana izao dia ampahany kely ihany ny tahirin-kevitra teo aloha izay tantanan'ny roa birao in Tumba sy Mölndal. Nanapa-kevitra izy io tamin'ny 2013 ny hifindra asa ho birao iray tao Broby Izy irery ihany no handaminana banknotes. Vola madinika Full fitantanana tonga ho nihazakazaka orinasa tsy miankina iray.
Banky foibe hafa noho ny teny soedoa manana ny fanadihadiana dia nampiseho fa vola dia iray amin'ireo fomba mora indrindra mba handoavana na olona sy ny raharaham-barotra. Ankoatra ny hosoka elektronika dia mihoatra noho ny vola hosoka. Security Transport Organization está (Eoropeana Security Transport Association) Efa taona maro lasa izay dia nampiseho fa ny vola no malaza indrindra sy azo antoka ny fomba fandoavam-bola any Eoropa. Esta nanome baiko ny fianarana mba hamahana ny banky sy ny carte de crédit orinasa izay te-hametraka tanteraka kontantlöshet. Tsy nampiseho fa ny tontalin'ny kontantlöshet ka nandeha hiady ny sitrapon 'ny olona, ​​ary nihevitra fa tena olona afaka misafidy ny fomba te-handoa.
Koa satria ny ankamaroan'ny vola fitantanana te hampitombo tokony hihaino ny maro an'isa. Nefa toa ilay lehilahy miaraka amin'ny "tsena" fa hoe raharaham-barotra. Ny Banky Foibe dia tsy tokony ho toy ny fitantanam-bola tsy miankina orinasa. Ny Banky Foibe dia tokony manana andraikitra ara-tsosialy lalina ny sehatra tsy miankina fa tsy afaka ny hiaina mifanaraka amin'ny. Noho izany, tsy tokony hampiasa ny fiteny izay an'ny sehatra tsy miankina. Io karazana "hidin-trano-in" amin'ny ankapobeny fanekena ny vola no zavatra tsara indrindra mety hitranga Zavatra rafitra vola.
Noho ny endrika ivelany dia manome ny Banky manana safidy mba hanome vola ny sata ara-dalàna maintsy. Fa afaka tsara hita eo amin'ny andininy izay fomba mitehina. Cash mora maha ara-dalàna intsony ny lalana d'exception, fifanarahana sy ny fifanarahana. Eto dia ny Riksbank mba hiarovana ny fanonerana tsena. Ankoatra ny olana (tsy tokony ampiasaina) vola dia tsy maintsy ho "lehibe toy izany ary toy izany koa hisy fiantraikany
olona maro ny tsena deteriorates '(mba hanao zavatra momba izany).
mifanohitra ihany vondrona sasany dia tokony hanana ny zo ampiasana vola. Tena tsara tarehy be ny Riksbank izay rehetra tokony hanapa-kevitra izay ara-barotra. Avy eo ny olona mankatò. Toy izany koa ao amin'ny fitsipika toy ny jadona.
Feo fikarohana dia mampiseho fa ny vola no lafo. Izany no ny fiarovana orinasa. Mazava fa ny tohan-kevitra ho afaka hijanona ao. Fa zava-dehibe izay mampiseho ny Riksbank ny overwrought fikarohana ny "tandrify ny toe-karena". Tsy miezaka ny hampiseho amin'ny kisary sy ny latabatra teo amin'ny tokonam-baravarana, izay milaza fa tsy mandoa ny mampiasa karatra. Efa ao amin'ny faritra sasany nilaza fa 70 satro-boninahitra mety ho ny fetra izay dia mandoa ny mampiasa karatra. Ny Riksbank any an-kafa ihany koa dia nilaza fa io fetra ny debit karatra ho amin'ny 20 satro-boninahitra, raha ny mifanaraka sarobidy ny voninahitra dia ho satro-boninahitra 450.
Angamba mitovy fomba ampiasaina amin'ny politika koa? Na iza na iza nahazo maherin'ny 500.000 satroboninahitra alohan'ny hetra dia tokony hifidy ny "Mpanao Didy Jadona Dick". Ireo izay mahazo ny vola izany dia tokony hifidy ny "Sture Praiminisitra". "Dick Mpanao Didy Jadona" foana ny safidy ratsy, na inona na inona ny toe-karena. Kontantlöshet foana ny lousy safidy.
Izany no nampiseho fa samy vola sy ny kaonty-monina (vakio cashless) fandoavam-bola dia manana toe-karena ny ambaratonga. Ao amin'ny teny ara-toekarena fotsiny, tsy misy fanoherana izany filazana. Ny ankamaroan'ny fiaraha-monina Miha mitombo ny vola mora vidy kokoa. Ny olana dia amin'ny alalan'ny fampihenana ny vola ho sakana amin'ny fanaintainana nanaisotra ny toe-karena ny ambaratonga. Miresaka momba ny vola izay lafo tsy rariny ao anatin'ity lohahevitra ity. Tahaka ny efa antsasaky ny vola, antsasaky ny fandoavam-bola cashless nanana fampitahana tsara mety efa natao.
Misy befog ny tsikera fa misy afaka roa ihany no hanatsoaka hevitra. Ny banky tsy miankina no tena fandraisana andraikitra izay nampiasa ny rafitra ho an'ny max. Ny Riksbank tsy nanao ampy ny mikasika ny toe-draharaha noho ny tsy fahaizana, tsy fandraisana andraikitra sy ny Tsy nety. Ny zavatra rehetra dia mampiseho mazava tsara fa ny karazana banky rehetra (anisan'izany ny Riksbank) dia hampihena ny vola. Ny banky tsy miankina hoditra dia fanjakana teo aloha amin'ny alalan'ny fampiasana vola be loatra fitantanana. Izany dia antony lehibe milaza fa ny vola no tsy mitondra ny azy vola lany. Izany no banky 'diso.
Misy milaza fa na inona na inona ny banky ho tampoka intsony ny fampiasana ny rafitra amin'ny fomba samihafa teo amin'ny cashless safidy. Tsy misy na inona na inona. Tokony hahatakatra ihany koa ny Riksbank. Ny teo aloha ny fampiasana be loatra ny vola fikirakirana mampiseho fa tsy misy afaka miantehitra amin'ny banky tsy miankina mba handray andraikitra. Maro ny ankizilahy hitombo ho olon-dehibe matotra lahy. Banky ireo olon-dehibe na oviana na oviana. Izy ireo tsy mitsahatra swiping avy ny mofomamy tavoara ireo.
Ao amin'ny taratasy voalaza etsy ambony nilaza fa ny karatra fandoavana maka, amin'ny antsalany, 25 segondra vao vita raha maka ny vola ditto 26 segondra. Inona no raharaha faharoa? Inona no mahatsikaiky fandresen-dahatra? Raha toa ny fivarotana mifarana PIFFLE ny vidin'ny iray
måndag 6 juli 2020 19:47
Be för min mage och hals som bränner, har ätit medicin en tid nu men det hjälper inte mycket! Be att jag får bli frisk och kan äta normalt igen! Tack!!